चीनमा पुरुषले बिहे गर्न केटी नै नपाएपछि विज्ञले दिए यस्तो अनौठो सुझाव, सबै चकित -
एजेन्सी – हिन्दु धर्मशास्त्रका अनुसार द्रौ’प’दीको विवाह पाँच पाण्डवसँग भएको थियो । नेपालको उत्तरी जिल्ला हुम्लामा बस्ने केही जातिहरुमा अहिले पनि यस्तो ब’हुप’ति प्रथा कायमै छ ।
एकजना महिलाले एकसाथ धेरै जना पुरुषसँग बिहे गर्ने र सबैसँग पालैपालो दिन बिताउने भन्ने कुरा आधुनिक समाजमा निकै असभ्य तथा अ’प’त्या’रिलो लाग्न सक्दछ । तर परम्पराको नाममा यस्तो प्रथा हाम्रै समाजमा चलिरहेको छ ।
उता चीनमा समेत एकजना अर्थशास्त्रीले पुरुषहरुको बिहे नहुने समस्या समाधानका लागि ब’हुप’ति प्रथा अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । वास्तवमा सन् १९८० मा एक सन्तान नीति अ’बल’म्बन गरेसँगै चीन आर्थिक रुपमा विकाशको फ’ड्को त मार्‍”यो तर लिंग अनुपातमा यसको ठूलो अ’स’र परेको छ ।
चीनमा रु’ढीवा’दी सोचयुक्त मानिसहरुले एउटा मात्र सन्तान जन्माउन पाइने भएसँगै छोरा मात्र जन्माउन थाले । जसका कारण त्यहाँ छोरीहरुको संख्या निकै कम भयो । त्यसैले चीनमा अहिले विवाह योग्य उमेरका धेरै युवकहरुलाई बिहे गर्नका लागि बेहुली पाउन मुस्किल परिरहेको छ ।
उक्त समस्या समाधानका लागि कां’ग एनजी नामक चिनियाँ अर्थशास्त्रीले निकै अनौठो उपाय सुझाएका छन् । उनले तिब्बतमा सदियौँदेखि चलिआएको ब’हुप’ति प्र’थालाई चीनभर अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार अहिले चीनमा लिं’गा’नुपात निकै धेरै छ, जसका कारण कैयन् युवकहरुको बिहे हुन पाएको छैन । अवस्था यस्तो कछ कि कतिपय छिमेकी देशबाट बिहेकै लागि भनेर महिलाहरुको तस्करी चीनमा हुने गरेका घटना पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
यदि चीनमा पुरुषहरुले बिहेका लागि महिला नपाउने र अ’विवा’हित नै रहनुपर्ने सम’स्याको समाधान भएन भने त्यसले सन्तान उत्पादन कम हुनेछ र अन्ततः चीनको अर्थव्यवस्थामा त्यसको प्रभाव पर्नेछ । यद्यपि चीनले एक सन्तान नीति खारेज गर्दै अहिले तीन सन्तान नीति अ’ख्तिया’र गरिसकेको छ । तर विवाहयोग्य उमेरका छोरीहरुको संख्या निकै कम हुनाले पुरुषहरु अविवाहित नै रहनुपर्दा कहाँबाट तीन सन्तान जन्मिनु ?
प्राध्यापक यी कांग एनजीले चीनको यो सम’स्याको समाधानका लागि सिफारिस गरेको ब’हुपति प्रथा निकै अनौठो प्र’था हो । उक्त परम्परा अनुसार एकजना स्त्रीको विवाह परिवारका दुई वा त्यसभन्दा बढी दाजुभाइसँग गराइन्छ । यद्यपि विवाह समारोहमा भने जेठो दाइले मात्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्दछ ।
बिहेपश्चात् चाहिँ बेहुली सबै भाइहरुकी साझा बन्दछिन् सबैसँग लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । त्यसरी जन्मिएका बच्चाहरु पनि सबैका साझा बन्दछन्, किनकि वास्तविक जैविक पिता को हो ? भन्ने पत्ता लगाउन पनि कठिन हुन्छ ।
अर्थशास्त्री प्राध्यापकको यस्तो सुझावले चीनमा एक प्रकारको चर्चा र वि’वादको सिर्जना गरेको छ अहिले । यदि केटा र केटी दुवै पक्ष यसमा सहमत हुने हो भने यो प्रथालाई अपनाउन सकिने उनको तर्क छ । विवाह नहुनु, निस’न्तान हुनु तथा खराब अर्थतन्त्र भएको देशको नागरिक हुनुभन्दा यो उत्तम उपाय भएको उनको मत छ ।
अमेरिका र अस्ट्रेलिया वि’रु’द्ध फ्रान्सको यस्तो कडा ए’क्स’न, विश्वभर नै ह’लच’ल
पतिले छोडेपछि सडकमा झा’डू लगाउँथिन् आशा, पाईन यस्तो ठुलो सफलता सबै छक्का
वैज्ञानिकहरुले बनाए घर ठण्डा बनाउने संसारकै यस्तो पेन्ट, घरमा अब एसी नचाहिने
पुरुषका यी ७ कुरामा सबैभन्दा बढी रि’सा’उँछ’न् महिला, टाढा हुन खोजिहाल्छन्